Ogaden News Agency (ONA) – Khilaafka Trump & Xisbiga Dimuqraadiga oo Cirka Isku Shareeray.
Khilaafka Trump & Xisbiga Dimuqraadiga oo Cirka Isku Shareeray.
Xili ay weli xidhan yihiin qeybo badan oo kamid ah Xafiisyada dowlada Federaalka Maraykanka todobaadkii 4aad ayuu Madaxweynaha Maraykanka soo bandhigay qorshe uu doonayo in lagu xaliyo ismarin-waaga ka dhashay miisaaniyada dowlada.
Xisbiga Dimuquraadiga ayaa weli diidan inay miisaaniyada ku daraan 5.7 bilyan oo dollar oo uu Trump sheegay inuu ku dhisi doono derbiga xaduuda Mexico lagu xirayo. Trump ayaa soo jeediyey in uu ogolaan doono in sadexda sano ee soo socda aan dalka laga tarxiili doonin dadka aan weli sharciga heysan oo ay ku jiraan dhalinyara ku kortay dalkaasi ee waalidiintooda dalka keeneen, kuwaasi oo ay xukuumada Trump horey u laashay sharuuc xuquuq dheeraad ah lagu siinayey inay dalkaasi sii joogi karaan.
Hogaamiyayaasha Dimuquraadiga oo diiday soo jeedinta Trump ayaa sheegay in Madaxweynaha uu doonayo inuu gorgortan ka dhigto dhalinta dalkaasi ku kortay si uu u helo lacagta uu doonayo inuu ku hirgeliyo mashruuca derbiga xaduuda oo ah mid uu ku galay ololihii doorashadii 2016, qorshahaasi Trump ayaa hada qar ka laalaada kadib markii Dimuquraadiga la wareegeen aqlabiyada Aqalka Hoose xili hada la isu diyaarinayo doorashada soo socota ee 2020.